Uzikhuphela njani iividiyo zeTik Tok Ngaphandle kweWatermark: Isifundo esisisiseko | Abadali be-Intanethi
Umthombo: ingcali yosetyenziso lwakho
IiWatermark bezisoloko ziyinkathazo kwiividiyo ezininzi, ngakumbi kwizicelo ezifana neTik Tok. Azisoloko zibalulekile kwaye ngamanye amaxesha azisoloko ziyinto elungileyo yokuhamba neevidiyo zakho. Ngale ndlela, kwaye ngenxa yesi sizathu, size ukusombulula le ngxaki esele ijikeleza entlokweni yakho ixesha elide.
Kule post, siza kuchaza indlela yokukhuphela iividiyo ngaphandle kwala manqaku kwaye siya kucebisa ezinye zezona zixhobo zibalaseleyo. ngoko unokuzisusa kwezinye ii-apps. Ukuyeka ezi ntlobo zamanqaku akuzange kube lula njengokuba bekunjalo ukuza kuthi ga ngoku kwaye sinethemba lokuba esi sifundo siya kuba luncedo olukhulu kuwe.
1 Yintoni uTik Tok
1.1.1 Iividiyo kunye noMculo
1.1.2 yiya kwintsholongwane
1.1.3 Umhleli wevidiyo
2 Isifundo: Khuphela iividiyo ngaphandle kweWatermark kwiTik Tok
3 Ezinye iinkqubo zokususa ii-watermark
3.1 I-Wondershare Filmora
3.3 I-Watermark ekwi-Intanethi yokususa
3.4 Umboniso weVenkile
Yintoni uTik Tok
Umthombo: Ixesha lekhefu
Ngaphambi kokuba siqalise kumxholo weposti, kufuneka sikuxelele ukuba yintoni iTik Tok, ngokuqinisekileyo sele uyayazi le nto sithetha ngayo, Sesinye sezona zixhobo zidumileyo zokudala umxholo okwangoku.
Ayivumeli kuphela ukwenziwa kweevidiyo kwaye ivumele ukuba kwabelwane ngayo kwezinye iinethiwekhi zentlalo, kodwa ikwaneziphumo ezahlukeneyo ezenza ukuba ibe yenye yezona zicelo zisetyenziswa kakhulu ngabasebenzisi baseSpain nakwihlabathi liphela. .
Njengoko kuchaziwe ngasentla, NgeTik Tok, ukwenza iividiyo zomculo kunokwenzeka. Abasebenzisi abaninzi bazinikele ekwenzeni iividiyo ezihlekisayo, ezinye zinesingqisho ngakumbi, kukho nabasebenzisi beTik Tok abangamagcisa kwaye benza iividiyo ezibonisa okanye ukufota.
Kwesi sicelo unokufumana imixholo eyahlukeneyo, ukongeza, xa ungena, isicelo esifanayo sikukhokelela kuthotho lwemixholo eyahlukeneyo kwaye kufuneka ukhethe ezona zikuthanda kakhulu. Ngale ndlela, iTik Tok iya kukubonisa kuphela umxholo owufunayo kwaye onomdla kakhulu kuwe.
Ezinye iimpawu zale nkqubo. kukuba ivumela amagcisa amaninzi kunye nabafoti ukuba babonise umsebenzi wabo ngeevidiyo. Yindlela elungileyo yokumela umsebenzi wakho kunye nabanye abasebenzisi ukuba banxibelelane nawe kwaye bafumanise ukuba ungubani kanye kanye.
Ukongeza, ngoku iTik Tok inxulunyaniswe nezicelo ezinje nge-Instagram, ke ukuba ufunyenwe kwesi sicelo, Baza kuyenza nakwamanye angakumbi, oko kwandisa inani labalandeli beakhawunti yakho. Ngaphandle kwamathandabuzo yeyona ndlela ilungileyo yokuzenza ubonakale kwaye abantu baxabise iiprojekthi zakho njengoko kufanelekile.
Ukuba sonke sivumelana ngento enye, kukuba sisicelo esinokusetyenziswa ukwenza umxholo onje ngeevidiyo. Kodwa into abaninzi abangayaziyo lukhetho analo umhleli wevidiyo weTik Tok. Ngaphandle kokuchasene namawaka eziphumo, Ikwanayo neentshukumo ezahlukeneyo zotshintsho kunye neefonti ezahlukeneyo onokuthi uzifake kwiividiyo zakho.
Ukuba unomdla malunga nehlabathi lokuhlelwa kwevidiyo kunye ne-montage okanye uphuma ngakumbi kwicandelo le-audiovisual, awunakuphoswa sesi sixhobo, apho unokusebenza khona njengomhleli kwaye wenze ezona montages zibalaseleyo.
Isifundo: Khuphela iividiyo ngaphandle kweWatermark kwiTik Tok
Into yokuqala esiza kuyenza nje ukuba siqale kuvula isicelo. Ukuba awukayikhuphi, siyakucebisa ukuba uyilungiselele kwaye uyifake kwisixhobo sakho. Ungayifumana ifumaneka kuzo zombini i-IOS kunye ne-Android.
Into yesibini esiza kuyenza nje ukuba i-Tik Tok ivuliwe kukukhangela ividiyo esifuna ukuyikhuphela, inokuba yividiyo ethile esiyithandileyo ngesizathu esithile okanye enye yezinto ezininzi ezivela kwi-algorithm yethu, kufuneka nje ukhethe enye.
Nje ukuba sicace malunga nevidiyo esiza kuyikhetha, kufuneka sabelane kwaye sikope ikhonkco. Le mifanekiso ikwikona esezantsi ekunene kupapasho. Ukuba siyayicinezela, isicelo siya kusibonisa ifestile entsha apho sinokufikelela kwiinketho ezininzi. Kufuneka nje sikhethe leyo isivumelayo kwaye isivumele ukuba sikope kwibhodi eqhotyoshwayo.
Xa sele sikopishe idilesi yevidiyo, emva koko siya kwi-browser yethu kwaye siya kukhangela inkqubo SnapTikVideo. Nje ukuba sifikelele kuyo, iya kusikhokelela kwiphepha apho iya kusibonisa ibha kunye nokhetho lokukhangela. Kule bar siya kuncamathelisa ikhonkco ebesilikhuphele ngaphambili kwaye ukhethe ukhetho "MP4 ngaphandle kwe-watermark". Nje ukuba siyikhethile, kuya kufuneka sicinezele kuphela ukukhuphela ividiyo kwaye yiyo loo nto.
Ukuba sifuna ukwenza inkqubo kwikhompyuter, kufuneka senze okufanayo kodwa ngala manyathelo:
Siza kukhangela iTik Tok kwisikhangeli sethu kwaye siza kungena, siza kuyikhangela ividiyo esifuna ukuyikhuphela, inokuba yividiyo ethile esiyithandileyo ngesizathu esithile okanye enye ngokungalindelekanga kwabaninzi abavelayo. algorithm yethu, kwanele ukuba khetha enye.
Siza kukopa ikhonkco ngendlela efanayo nesenzileyo kwimowudi yeselula kwaye siya kwiprogram ye-SnapTikVideo.
Nje ukuba sifikelele kuyo, iya kusikhokelela kwiphepha apho iya kusibonisa ibha kunye nokhetho lokukhangela. Kule bar siya kuncamathelisa ikhonkco ebesilikhuphele ngaphambili kwaye ukhethe ukhetho "MP4 ngaphandle kwe-watermark". Nje ukuba siyikhethile, kuya kufuneka sicinezele kuphela ukukhuphela ividiyo kwaye yiyo loo nto.
Njengoko ubonile, ayisosifundo esinzima ukusilandela, kuba amanyathelo alula kakhulu. Ukuba uyazibuza ukuba yintoni i-SnapTikVideo, Ngomnye weenkqubo ezininzi ezikhoyo, apho sinokufikelela ukuze sikwazi ukukhuphela iividiyo kule sicelo ngaphandle kwesidingo seendleko.
Okulandelayo, siza kukubonisa ezinye iinkqubo apho unokukhuphela iividiyo ngaphandle kwee-watermark kwaye oko kuya kuba luncedo kakhulu. Nganye kwezi nkqubo zizixhobo onokuthi uziphendle ngaphandle kokukhuphela kunye nokuzifaka. Ukongeza, uninzi lwazo lusimahla okanye lunomda omkhulu wokukwazi ukuzikhuphela. Sekunjalo ziluncedo kakhulu.
Kwaye ekubeni singafuni kukwenza ukuba ulinde kwakhona, nanku ke sihamba.
Ezinye iinkqubo zokususa ii-watermark
IFilmora ngomnye wabahleli bevidiyo ababalaseleyo phaya. Uqulethe uluhlu olubanzi lweziphumo ezinokuba nomdla kwiividiyo zakho. Ukongeza, ukwanalo nokukhetha ukukwazi ukususa ii-watermark ezithile enkosi kwinkqubo yayo.
Ujongano lwayo kunye noyilo olungaphakathi alukholeleki. Kulula kakhulu ukuyisebenzisa kunye nokuhamba kwaye inenguqulelo yasimahla esinokusebenza ngayo ukuyigcina. Ngaphandle kwamathandabuzo yeyona ndlela ilungileyo yokuqalisa ukuhlela kunye nokudibanisa iividiyo zakho kwaye uzilayishe kwiinethiwekhi zentlalo.
Ngomnye wabahleli bevidiyo ababalulekileyo abakhoyo. Ikwasimahla kwaye ikuvumela ukuba wenze iividiyo kwaye uzihlele ngobuchwephesha kwaye ngaphandle kweendleko. KUNYELukhetho olugqibeleleyo ukuqala ukuyila. Ukongeza, ukuba uzinikele kuyilo lwegraphic kwaye uzinikele kwisazisi senkampani, Ukwanakho ukususa ii-watermark zezinye iimpawu kunye neelogo ngendlela elula.
Ngaphandle kwamathandabuzo sesinye sezona zixhobo zibalaseleyo zokuqalisa ukuhlela iividiyo kwaye ube yincutshe kwihlabathi le-audiovisual, kufuneka uyizame.
I-Watermark ekwi-Intanethi yokususa
Yenye yeenkqubo zokugqwesa ezikuvumela ukuba ususe ii-watermark. Ndiyabulela kwezi nkqubo, ukususa ii-watermark akuwona umsebenzi onzima. Ukongeza, ikwanayo nenguqulelo encinci yasimahla oya kuba nakho okuninzi ukuze ukwazi ukusebenza ngokukhululeka kwiiprojekthi zakho, ngaphandle kokuzibekela umda.
Le nguqulelo yasimahlaa ikuvumela ukuba ususe ii-watermark ezi-5 zizonke ngenyanga, oko kukuthi, iividiyo ezi-5 ngenyanga. Ukuba into esiyifunayo kukusebenza ngeevidiyo ezingaphezu kwesihlanu, kuya kufuneka sihlawule iindleko, kodwa azibanzi kakhulu.
Ngesi sixhobo silula unokususa ii-watermark kuyo yomibini imifanekiso kunye neevidiyo. Into eyenza umsebenzi ube lula kakhulu kunezixhobo zangaphambili ezinikezelwe kuphela ukususa ii-watermark kwiividiyo.
Kulula kakhulu ukusebenzisa isixhobo kunye ne-intuitive. Zivumele umangaliswe kwaye uqale ukuzama ezinye zezixhobo esizicetyisileyo, Ukongeza, unokwenza uphando olubanzi kwaye uvumele ukuba umangaliswe ziindidi ezahlukeneyo zezixhobo ezikhoyo.
Ngaphandle kwamathandabuzo, uninzi lwazo luphawulwa ngokuphatha lula.
Ukukhuphela iividiyo kunye nokususa ii-watermark ngumsebenzi obonakala ulula kakhulu ukuba sithetha ngeenkqubo ezininzi ezikhoyo kwaye zikhoyo. Ngaphandle kwamathandabuzo, uninzi lwazo, njengoko kuchaziwe ngasentla, kulula kakhulu ukuzisebenzisa, ngakumbi ukuba ungumfundi oqalayo okanye ungumfundi oqalayo kwaye awuzinikezele ekuhleleni ividiyo.
Siyathemba ukuba isifundo sibe luncedo olukhulu kuwe kwaye siyisombulule loo ngxaki ibininzi entlokweni yakho. Ngoku ixesha lifikile lokuba ukhuphe ulwazi lwakho kwaye ube nobuganga bokwenza njalo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Uzikhuphela njani iividiyo zeTik Tok ngaphandle kweWatermark